Umbulali osemoyeni | Scrolla Izindaba
I-Coronavirus ibonakala ihlala emoyeni ikakhulukazi ezindaweni ezigcwele abantu noma
emakamelweni angenawo umoya.
Abantu bakhipha izinhlobo ezimbili zamaconsi uma bephefumula, bekhwehlela noma
bekhuluma. Amaconsi amakhulu awela phansi. Amancane wona abizwa – ngomphunga phecelezi iaerosol – ohlala emoyeni amahora amaningi.
Abacwaningi ezibhedlela zase-China bathole umphunga ombalwa oqukethe leli gciwane
emagumbini ezibhedlela, ezitolo ezinkulu ama-supermarkets nalapho kuhlala khona abantu.
Iningi lawo litholakale ezindlini zangasese nasezindaweni ezinabantu abaningi, ngokusho
kwabezindaba i-Bloomberg News.
Inani eliphezulu kakhulu lomphunga belisemagumbini lapho abasebenzi bezokwelapha
bekhumulela khona izingubo zokuzivikela. Lokhu kusho ukuthi igciwane elisezimpahleni
nakwizimfonyo zabo liphinde libe ngumoya.
Ucwaningo lukhombise ukubaluleka kokungena komoya omncane, ukunqamula izixuku
nokuthuthwa kwendle ngokucophelela.